बाबुराम बने हजुरबुबा, कमल थापाले दिए बधाई - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हजुरबुबा बनेका छन् ।
उनकी छोरी मानुषीले आइतबार बिहान छोरा पाएपछि बाबुराम हजुरबुबा बनेका हुन् । नाति काखमा लिएको फोटो सार्वजनिक गर्दै बाबुरामले छोरी मानुषी, ज्वाइँ जेकेन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीलाई बधाई तथा धन्यवाद दिएका छन्।
याे पनि पढ्नुस बाबुरामको प्रश्नः पूर्व आइजीपी खनाल कसको आदेशमा यस्तो हर्कत गर्न तम्सिए?
महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ)मा शल्यक्रियामार्फत् मानुषीले बच्चा पाएकी थिइन्। सफल सल्यक्रियाका लागि बाबुरामले डाक्टर गीता गुरूङ नेतृत्वको टिमलाई धन्यवाद दिएका छन्।
हजुरबुबा भएपछि फुरूङ्ग भएका बाबुरामले ठट्टा गर्दै लेखेका छन्- हाम्रो परिवारमा २२ औं शताब्दी देख्ने सम्भावना भएको एक मात्र शिशुको सु-स्वास्थ्यको कामना।
याे पनि पढ्नुस बाबुरामले मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा
बाबुरामले आफू हजुरबा भएको फोटो फेसबुक र ट्वीटरमा पोस्ट गरेपछि धेरैले उनलाई बधाई दिएका छन्।
उनका सहपाठीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीटमार्फत् बधाई दिएका छन्। बाबुराम र कमल थापा अस्कल क्याम्पस सँगै पढ्थे।
थापाले बाबुराम हजुरबा भएकोमा बधाई दिँदै भनेका छन्, ‘लौ बधाई छ सम्पूर्ण परिवारलाई। यसमा भने सहपाठी मित्रभन्दा म धेरै अगाडि रहेछु। मेरो त ७ वटा नातिनातिनी भइसके ।’
याे पनि पढ्नुस पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा बाबुको हातबाट दशैंको टीका ग्रहण
ट्याग्स: कमल थापा, डा. बाबुराम भट्टराई, हजुरबुबा